Iividiyo ezili-13 ze-AutoCAD 2009 -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/13 AutoCAD 2009 IiVideos
Iqela le-AUGI lilayishe ingqokelela yeevidiyo ezichaza iimpawu ezintsha ze-AutoCAD 2009 eyaziwa ngokuba nguMxhasi kwaye kude kube ngoku ugxeka ngenxa yemali yezibonelelo ezifunayo, nangona xa ubukela ukusebenza kwividiyo, kunokubonwa ukuba akuyiyo kuphela imveliso.
Iividiyo azingalunganga, kuba nangona iaudiyo ikwisingesiNgesi, ungafunda ukusebenza kwimizuzu embalwa ungakhange uhoye nencwadana.
Ezi zividiyo ze-13:
Oku kuthatha imizuzwana engama-45 kwaye kubonisa kuphela isikrini esitsha, ngelixa i-narration izama ukucacisa ukuba ijonge ntoni kwi-AutoDesk ngezinto zokusebenza ... ukwandisa imveliso, ukuphucula ukuphathwa kwemenyu yebar ...
Inikezelwe ekuchazeni ukuba isebenza njani imenyu yokufikelela ngokukhawuleza, kwikona ephezulu ngasekhohlo. Ukukhangelwa kwemiyalelo kuyenzeka, apho imiyalelo ehambelana nokubhaliweyo iboniswa; ukuba uchwetheza "umgca", yonke imiyalelo equlathe lo mbhalo iyavela (xline, mline, pline etc.)
Ibha yamathuluzi okuFikelela
Oku kuchaza amanye amaqhosha ekunene kweleta ebomvu A, echazwe kwividiyo edlulileyo. Kuyathakazelisa ukuba kule bar, ukucofa ekunene kusebenze ukhetho lokwenza ngokwezifiso amaqhosha, njengemivalo eyaziwayo ngaphambili. Ke ukuba ufuna ukwenza i-Dweba kwaye uguqule imivalo, cofa ekunene kule bar encinci kwaye bayasebenza apho.
Chaza ukuba isebenza njani ibar ethe tyaba, engayithandiyo. Sele ubukele ividiyo uyabona ukuba iluncedo kwaye iyasebenza, kodwa kwabo bafuna ukwenza izicwangciso ngokukhawuleza kuyacaphukisa kuba ngaphandle kokuthatha indawo eninzi yomsebenzi, isenzo ngasinye siphakamisa iwindow yemeko enezinto ezininzi ezisebenzayo esizisebenzisela i-AutoCAD (ye yenza izicwangciso, hayi ukwenza imibongo). Ubuncinci ividiyo ibonisa ukuba inokutsalwa ibar esecaleni, kwaye inokwenziwa lula nayo.
Kule vidiyo yonke i-reverse bar ichaziwe, kufanelekile ukuyibona kuba ayisiyonto ingaphezulu kwale besinayo, ngokwahluka kukuba amaqhosha angaphezulu kwe "geek" kwaye ngoku kukho ii-zoom / pan pan. Kukwakho neqhosha lokuvula iitemplate ezisecaleni kwiinguqulelo zamva nje.
Le vidiyo ichaza into abayenzileyo kunye netafile esecaleni ebesiyazi njengebha yepropathi. Ngoku yitafile enokubonakala okanye inyamalale kuphela xa ifuneka, kwaye unokumisela nokuba loluphi uhlobo lwemihlaba kwaye mangaphi esifuna ukuba lapho. Kubonakala ngathi lolunye lolona hlengahlengiso lubalaseleyo lwe-AutoCAD 2009, nangona isilela, kuba imeko yeefestile zemeko kufuneka ikwazi ukulungelelaniswa ngeendlela ezahlukeneyo zemiyalelo.
Iindlela zokujonga ngokukhawuleza
Oku kubonisa ukuphuculwa kokuphathwa kweelayouts ... nangona oko kungancedi mntu ukuba abazi ukuba bazenze njani.
Imizobo Yokujonga Ngokukhawuleza
Ewe, ziqwalasele, ziyafunda ngokwaneleyo ukuba zingalahleki kuhlobo olutsha ... ah!, Kwaye hayi, ayichazi indlela yokuqhekeza ukuba ngaba yile nto ubuyifuna.
enye i-autocad ayinayo inkxalabo eninzi yokudweba indiza, ngoku ndiyabona ikhupheka kakhulu
j. guadeloupe ramirez uthi:
Umxholo elungileyo kakhulu vidiyo yonke into kwi AutoCAD NA VERSION OF AutoCAD KUNYE AHLALA 2009 nguye Siyavuyisana nani kakhulu
Sergio Carpio uthi:
Kuhle kakhulu ... andizange ndifumane inkcazo ecacileyo ye-AutoCAD 2009 kunoko.
Enkosi Rubén, nangona ndimele ndivume ukuba indawo yakho ibikwindawo entle ekukhangeleni kwa eli gama linye ... kwaye apho ndixabisa ikhonkco lakho elindizisele ukugcwala.
ubuliso, kwaye phambili kunye nebhulogi yakho
Ndiyakuvuyisana ngale post. Mayelana ne-AutoCAD 2009 akukho mntu uyinqobileyo, kokubili kumgangatho wabo kunye nolwazi.